Ndị Na-asụ Asụsụ Heshan Kriol na Dọminikan Ripọblik | Akwụkwọ Mgbaafọ nke 2015
Otú E Si Malite Ọgbakọ Ndị Na-eji Asụsụ Heshan Kriol Amụ Ihe
Na Dọminikan Ripọblik, ọtụtụ ndị na-asụ asụsụ Spanish na-ege anyị ntị nke ọma. Ma, ka oge na-aga, ndị na-asụ asụsụ ọzọ bịara biri na Dọminikan Ripọblik. Ọtụtụ n’ime ha na-egekwa ntị n’ozi ọma anyị na-ezi ha. Obodo Heiti na Dọminikan Ripọblik gba. Ọ bụkwa asụsụ Heshan Kriol ka ọtụtụ ndị na-asụ na Heiti. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị mgbe niile ka ihe na-adabara ndị Dọminikan Ripọblik na ndị Heiti, ma ọtụtụ puku ndị Heiti na-arụ ọrụ na Dọminikan Ripọblik. Ha adịkwuola ọtụtụ kemgbe afọ ole na ole gara aga.
N’oge gara aga, e nweghị ọgbakọ na-amụ ihe n’asụsụ Heshan Kriol. N’ihi ya, ụmụnna anyị na-agwa ndị na-asụ Heshan Kriol nwere mmasị ka ha soro ọgbakọ Spanish na-amụ ihe. Ma, Òtù Na-achị Isi chọrọ ka ha na-aghọtakwu ihe ha na-amụ n’ọmụmụ ihe. N’ihi ya, n’afọ 1993, ha gwara alaka ụlọ ọrụ dị na Gụadilop ka ha ziga ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche na Dọminikan Ripọblik ka ha nyere ndị na-asụ Heshan Kriol aka. Ndị di na nwunye atọ wepụtara onwe ha gaa. Otu n’ime ha bụ Nwanna Barnabé Biabiany na nwunye ya Germaine. Nwanna Barnabé sịrị: “Mgbe anyị bịara, e nwere naanị broshọ abụọ n’asụsụ Heshan Kriol. Akwụkwọ anyị ndị ọzọ dị n’asụsụ French. N’ihi ya, anyị na-asụgharị ha n’asụsụ Heshan Kriol.”
Na Jenụwarị afọ 1996, e nwere ndị nkwusa itoolu nọ na Higuei, na ndị nkwusa iri nọ na Santo Domingo kwetara na ha ga-eso ìgwè ga na-enwe ọmụmụ ihe n’asụsụ Heshan Kriol. N’ihi ya, e hiwere ìgwè ga na-amụ ihe n’asụsụ Heshan Kriol na Higuei nakwa na Santo Domingo. Ha mechakwara ghọọ ọgbakọ. Ma, e mechara kposaa ha ebe o yiri ka ọtụtụ ndị Heiti hà chọrọ ịmụ asụsụ Spanish, nke mere ha ka ji na-aga ọmụmụ ihe n’ọgbakọ ndị na-eji asụsụ Spanish amụ ihe. Nwanna Barnabé sịrị: “Anyị na ụmụnna ndị na-arụ na Ngalaba Ije Ozi n’alaka ụlọ ọrụ nwere nnọkọ ma kwekọrịta na a ga-akwụsịtụgodị iji asụsụ Heshan Kriol na-enwe ọmụmụ ihe.”
A Maliteghachiri Inwe Ọgbakọ n’Asụsụ Heshan Kriol
N’afọ 2003, Òtù Na-achị Isi zigara Nwanna Dong Bark na nwunye ya Gladys na Dọminikan Ripọblik ka ha na-ezi ndị mmadụ ozi ọma n’asụsụ Heshan Kriol. Ha kwusara ozi ọma na Higuei afọ abụọ. Ọtụtụ ndị gekwara ha ntị. N’ihi ya, n’abalị mbụ n’ọnwa Jun, afọ 2005, e hiwere ọgbakọ na-eji asụsụ Heshan Kriol amụ ihe. Nwanna Dong Bark na Nwanna Barnabé Biabiany nakwa otu onye ozi ala ọzọ aha ya bụ Steven Rogers gara ebe niile e nwere ndị na-asụ Heshan Kriol zie ha ozi ọma.
Ọtụtụ ndị batara n’ọgbakọ, e hiwekwa ọgbakọ ndị ọhụrụ. N’abalị mbụ n’ọnwa Septemba, afọ 2006, e hiwere sekit mbụ na-eji asụsụ Heshan Kriol amụ ihe. E nwere ọgbakọ asaa na ìgwè abụọ na sekit a. Ọ bụkwa Nwanna Barnabé Biabiany bụ onye nlekọta sekit a.
Ka oge na-aga, e zitekwuru ndị ozi ala ọzọ na Dọminikan Ripọblik ka ha bịa na-ezi ndị na-asụ Heshan Kriol ozi ọma. Ọtụtụ ụmụnna anyị sikwa na Kanada, Yurop, Amerịka, na ebe ndị ọzọ bịa nyere ha aka. A họpụtara ụmụnna ụfọdụ ma nke a na-akọ n’asụsụ a ka ha hazie ihe a ga na-akụziri ụmụnna ndị chọrọ ịmụ Heshan Kriol.
Ọtụtụ ndị Heiti weere ya na onye na-abụghị onye obodo ha nke ma asụsụ ha bụ Onyeàmà Jehova
Mbọ ọtụtụ ndị Dọminikan Ripọblik na-agba amụ asụsụ Heshan Kriol na-abara ndị Heiti uru. Mgbe nwanna onye Dọminikan Ripọblik ji asụsụ Heshan Kriol na-ezi onye Heiti ozi ọma, ahụ́ na-eru onye ahụ ala, ya egee ntị. Ọtụtụ ụmụnna anyị amụtala asụsụ Heshan Kriol, nke na ọtụtụ ndị weere ya na ndị na-abụghị ndị Heiti na-asụ Heshan Kriol bụ Ndịàmà Jehova.
Otu ihe merenụ gosiri na ọ bara uru inwe mmasị n’ebe ndị na-asụ asụsụ ọzọ nọ. Dị ka ihe atụ, e nwere otu nwanna nwaanyị bụ́ onye Dọminikan Ripọblik ma asụsụ Heshan Kriol. Ọ bụ ọsụ ụzọ. Mgbe ọ nọ n’ozi ọma, ọ hụrụ otu di na nwunye bụ́ ndị Heiti nwere mmasị ịmụ Baịbụl. N’ihi ya, ọ gara nletaghachi na nke ha. Nwanna nwaanyị a sịrị: “Mgbe m rutere, m suturu nke nwaanyị ọnụ na ntì, nke bụ́ otú ụmụ nwaanyị Dọminikan Ripọblik na-esi ekele ibe ha. Nwaanyị ahụ bidoro bewe ákwá. M jụrụ ya ihe na-eme ya, ya asị m, ‘kemgbe m biwara n’obodo a, nke a bụ nke mbụ mmadụ na-esi otú a ekele m.’”
Jehova na-agọzi ozi ọma ụmụnna anyị na-ezi ndị na-asụ asụsụ Heshan Kriol. Nke a emeela ka ọtụtụ ndị bata n’ọgbakọ. Ka ọ na-erule abalị mbụ n’ọnwa Septemba afọ 2009, e nweela ọgbakọ iri abụọ na atọ na-eji asụsụ Heshan Kriol amụ ihe, nweekwa ìgwè iri abụọ. N’ihi ya, e hiwere sekit nke abụọ na-eji asụsụ Heshan Kriol amụ ihe. Ọtụtụ ndị bịara maka Ncheta Ọnwụ Jizọs n’afọ 2011. Nke a gosiri na ọtụtụ ndị ka ga-abata n’ọgbakọ. Dị ka ihe atụ, e nwere naanị ndị nkwusa iri na otu n’obodo a na-akpọ Río Limpio. Ma, ndị bịara maka Ncheta Ọnwụ Jizọs dị narị mmadụ ise na iri itoolu na anọ. Otu narị mmadụ na iri asaa bịakwara na nke e nwere n’obodo a na-akpọ Las Yayas di Vịajama, n’agbanyeghị na e nweghị ndị nkwusa n’obodo ahụ. Na Septemba afọ 2011, e nwere ọgbakọ iri atọ na atọ na ìgwè iri abụọ na otu ji asụsụ Heshan Kriol amụ ihe. N’ihi ya, e hiwere sekit ọzọ n’afọ 2012.
Alaka ụlọ ọrụ anyị ndị dị na Dọminikan Ripọblik na Heiti na-agbakọ aka ọnụ e ji asụsụ Heshan Kriol azụ ụmụnna anyị ndị si n’obodo abụọ a. E nweela klas ise e ji asụsụ Heshan Kriol kụziere ụmụnna ihe n’Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Baịbụl Maka Ụmụnna Na-alụbeghị Nwaanyị. E nweekwala klas anọ e ji asụsụ a kụziere ụmụnna ihe n’Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Baịbụl Maka Ụmụnna Lụrụ Di na Nwunye.
Ebe ụmụnna anyị na-amụ asụsụ Heshan Kriol
Otú Ọgbakọ na Ìgwè Na-amụ Ihe n’Asụsụ Heshan Kriol Si Mụbaa
Malite na 2005 ruo 2014